Akụkọ - Olee otu esi ahota igwe igwe oku?
Olee otú Họrọ gị Okpomọkụ Press Machine?
Gịnị bụ okpomọkụ pịa igwe?
Igwe ihe igwe na-ekpo ọkụ (ma ọ bụ "igwe na-ebufe ọkụ") na-enyefe usoro ma ọ bụ atụmatụ maka ihe dịka T-shirts, pad òké, ọkọlọtọ, akpa aka, iko, okpu, wdg site na oge, ọnọdụ okpomọkụ, na nrụgide. Ejiri igwe ihe eji eme ka ihe kpoo oku di egwu, ebe otutu ihe akpo oku di egwu nwere oru ichota di iche-iche nke nwere ike ichekwa oge, okpomoku na nsogbu. Ewezuga nhọrọ ọrụ igwe ọkụ ọkụ, ụfọdụ igwe nrụpụta ihe ọkụkụ na-enyekwa ọrụ ndị ọzọ dị ka mmapụta akpaka, ịpị akpaka, wdg, nke nwere ike izute ngwa gị. Ihe ọzọ ị ga-atụle bụ ma iji igwe ikuku ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ ma ọ bụ igwe eletriki magnetik na-ewepụta oge iji chekwaa oge na ike mmadụ. Dị ka ị maara, enwere ọtụtụ mkpebi ị ga - eme mgbe ị na - ahọrọ igwe igwe na - ekpo ọkụ, ebumnuche anyị bụ ịza ajụjụ ndị a niile na ntuziaka ndị ahịa a zuru ezu!
Kedu ụdị igwe ntụgharị ikpo ọkụ nwere ike izute mkpa m?
Direct mgbali okpomọkụ pịa igwe
Nke kachasị na ahịa bụ igwe na-enyefe ọkụ na-ebugharị, nke bụkwa ihe kachasị mfe iji rụọ ọrụ maka novices.
Ngabiga n'Ebe Okpomọkụ Press Machine
Site na igwe na-ebugharị igwe na-ekpo ọkụ, ị nwere ike ibuputa ihe ndị ka sie ike, akụkụ nke elu nwere ike ịgbanye iji gbochie ọkụ ọkụ n'oge ịdebe ihe, yabụ ị nwere ike ịme ngwa ngwa mmepụta, belata mkpofu, ma dịrị ngwa ngwa, dị nchebe ma dokwazie.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Tale?
Yiwu Tale Machinery & Mapụtara Parts Facoy bụ a emeputa nke sublimation igwe na akụkụ ahụ mapụtara na-onwem nke ọma ule ule na ike oru ike. Na a dịgasị iche iche, ezi mma, ezi uche ahịa na nkecha aghụghọ, anyị na ngwaahịa na-ọtụtụ-eji ọtụtụ ọrụ. Anyị isi ngwaahịa nwere T-uwe elu okpomọkụ nyefe igwe, 4-1 digital Foto muglọ Nga ebi akwụkwọ, 6-1 digital okpomọkụ nyefe igwe, 8-1 digital okpomọkụ nyefe igwe, Foto muglọ Nga ebi akwụkwọ igwe, na yiri ntekwasa Foto atedlọ Nga, sublimation Foto muglọ Nga, agba na-agbanwe agbanwe Foto muglọ Nga, music Foto muglọ Nga, flash Mbad na ink akwụkwọ. All ngwaahịa na-ebe nile ghọtara na tụkwasịrị obi site ọrụ na ike izute nọgidere na-agbanwe akụ na ụba na-elekọta mmadụ mkpa. Welcome OEM, anyị nwere obi ụtọ na-enye sample igwe na obere iji na-anabata too.We anabata ọhụrụ na ndị agadi ahịa si n'agbụrụ dị iche iche kpọtụrụ anyị maka ọdịnihu azụmahịa mmekọrịta na ibe ịga nke ọma!